साउने सोमबार : छुट्टै पवित्र, छुट्टै महिमा – Rastriya Yuvajagaran News
६ श्रावण २०७६, सोमबार ०८:४४019
पवित्र जलाशयको जल शिवलिंगमा चढाएमा मनोकांक्षा पूरा हुने धामिर्क विस्वासका कारण साउन महिनाको सोमबार बोलबम जाने चलन रहि आएको छ । बिभिन्न पवित्र नदी, जलाशय, कुण्ड लगायतको जल खाली गोडा तथा पैदलै हिडेर शिवलिंगमा चढाउने बोलबमको विशेसता रहेको छ । विशेस गरि साउनको सोमबार ब्रत लिने र शिवालयहरुमा जल चढाउने चलन पछिल्लो दशकमा लोकप्रिय बन्दै गएको छ । यस दिन देश भरिका मात्र नभई भारतका बिभिन्न मन्दिर तथा शिवालयहरुमा बोलबम् गई जल चढाउने चलन छ ।
विराटगर, ०६ साउन २०७६ । सनातन धर्मावलम्बीहरुको लागि पवित्र महिना साउन त्यसमा पनि आज भगवान शिवप्रति श्रद्धा र भक्तिभाव दर्शाउँदै आराधना गर्ने पहिलो सोमबार । जुन सोमबारदेखि पवित्रता बोकेको बोलबमको यात्रा समेत प्रारम्भ हुने दिन । यसै पनि आजको दिनले पवित्रता बोकेको छ ।
शिवजीलाई मनपर्ने बस्त्र र पहिरनमा सजिएर शिलायलमा पुगेर भक्तिभाव दर्शाउने, प्रेम देखाउने सोमबारका रुपमा हरेक महिलाले लिने गर्दछन् । साउनमा शिवालयमा भेटिने हरेक महिला आफूले लगाउने हरियोलाई भगवान् शिवजीको मनपर्ने रङ्सँग जोडेर बुझ्ने गर्छन् । यस्तै, धेरै महिलाको जमघट हुने पशुपतिमा पनि प्रायः साउनभरि नै युवती हरियो पहिरनमै बढी भेटिन्छन् । विवाहिताका लागि मेहेन्दी, हरियो चुरा र पहिरन सौभाग्यको प्रतीक हो भने अविवाहित महिला यसलाई उत्सुकता जगाउने रमाइलो माध्यमको रूपमा बुझ्छन् । कतिपयका लागि भने हरियो फेसनेवल बन्ने काइदा हुने गर्छ ।
यतिबेला प्रायः महिलाको हातमा हरियो चुरा, फुल बुट्टे मेहेन्दी र हरियो पहिरनमात्र देखिन्छ । यो माहोलले हरियो रङमा रुचि नहुनेलाई रुचि बढाएको छ । सबैखाले उमेर समूहका महिला अहिले कस्मेटिक पसल, फेन्सी पसल र बुटिकमा हरियोमा पनि परिमार्जित रङ र फेसनेवल डिजाइनका सौखिन बढी छन् ।
साउनको सोमबार शिवको पूजाआजा गर्दा मनोकाक्षा पूरा हुने विश्वासका साथ बिहानैदेखि महिला दिदीबहिनीहरु शिवमन्दिरमा गएर पूजाआजा गरिरहेका छन् ।
महिलाहरुले हरियो रंगका वस्त्र, चुरा र मेहंदी लगाएर भगवान शिवको पूजा तथा आराधना गरी ब्रत बस्ने गर्छन । साउन महिनाको सोमबार शिवको प्रिय दिन मानिन्छ । त्यसैले साउनको हरेक सोमबार श्रद्धालुहरुले रातो, हरियो र पहेंलो बस्त्र तथा चुरा(पोते लगाएर शिवको पूजा गर्दछन् । दिनभर व्रत बसेर शिवको पूजा गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ ।
यस पटकको साउन महिनामा पााच वटा सोमवार परेको छ । पाँचवटा सोमबार परेको साउन महिना झन् शुभ र पवित्र मानिन्छ ।
सनातन हिन्दु धर्मावलम्बी मात्र नभएर साउने सोमबार मध्य युरोपका देशहरुमा समेत सोमवारको खास महत्व बोकेको छ । मध्य युरोप, खासगरी पोल्याण्ड, चेक गणतन्त्र तथा पूर्वी युरोपको युक्रेन लगायतका देशका क्रिस्चियनहरुमा सोमवारको दिन केटीहरु पानी(पानी हुने दिन हो । सोमवारको दिन केटाहरुले केटीहरुलाई पानीले भिजाइदिने गर्छन् । अझ आफुलाई मन परेको केटीलाई पानी छ्यापेर टाउको देखि पाइतालासम्म निथ्रुक्कै भिजाउन पाउँदा केटाहरुले जितेको सम्झिन्छन् । यस्तो संस्कारलाई वेट मण्डे अर्थात् भिजेको सोमवार भनिन्छ । भिजेको सोमवार मनाउँदा सबै पाप नष्ट हुने विश्वास गरिन्छ । वर्षैभरीका सोमवार यसरी पानीले भिजाउने खेल खेलिने भने होइन । हिन्दु महिलाहरुले साउनको सोमवारलाई विशेष रुपमा मनाउने गरेझैँ मध्य तथा पूर्वी युरोपका इसाइ धर्मावलम्बीहरुले खासगरी क्रिस्चियनहरुको पवित्र सप्ताह इस्टरको दोश्रो दिन अर्थात् इस्टर मण्डेको दिन यसरी महिलालाई पानीले भिजाउने काम गर्छन् । केटाहरु बोतल तथा बाल्टिनमा पानी भरेर केटीहरुलाई लखेट्दै पानी खन्याइदिने गरिन्छ ।
Related tags : Saune sombar
यो खबर हेर्नुहोला । : "साउने सोमबार : छुट्टै पवित्र, छुट्टै महिमा". यहाँ लिन्क छ : https://yuvajagaran.net/?p=18602. Thank you